सञ्जीवको ब्लग: राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपक्षमा
राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपक्षमा
दुई वर्षजति अघि हुँदो हो बहुचर्चित संविधानविद प्रा. सूर्य सुबेदीको भाषण सुन्ने मौका जुर्यो । उनि नयाँ नेपालमा (भावी) सरकारको सम्भावित स्वरूपका विषयमा बोल्दै थिए । उनको प्रस्तुतिको विषय "नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली" भन्ने थियो र म पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीका राम्रा पक्षहरूका विषयमा विद्वान वक्ताको गहन विचार सुन्न लालायित थिएँ ।
सूर्य सुबेदी कुनै बेलामा नेपालमा दन्ते कथाका पात्र जस्तै थिए । पत्र-पत्रिकामा दिनहुँजस्तो छापिरहने उनको झल्झल बलेको मुहार देख्न पाउनु पनि सौभाग्य जस्तो लाग्थ्यो । उनले संवैधानिक कानूनको विषयमा विश्वका कतिपय मुलुकलाई सघाएका छन् रे भन्ने पनि सुनेको थिएँ । तर त्यो दिन जसैजसै ति प्राध्यापक बोल्दै गए, उनीप्रतिको मेरो श्रद्धा र सम्मानपनि व्हिस्किमा हालेको आइसको डल्लोजस्तो पग्लिदै गयो । उनले आफ्नो भाषण सकिसक्दा लगभग १०० देशीविदेशी विद्वानकाबीच उनले देखाएको बौद्दिक दरिद्रताबाट खिन्न हुँदै म लुसुक्क आफ्नो बाटो लागें ।
प्रस्तुतिको पहिलो खण्डमा उनले आफ्नो परिचय दिए । परिचय के थियो र -सुन्दै अप्ठेरो लाग्ने दम्भले भरिएको ठूलो स्वरमा उनले आफू कति देशको कन्सल्टेन्ट हुँ, कति देश घुमेको छु, कस्ता होटेलमा बस्छु र यो कार्यक्रममा भाग लिन कतिओटा असाइनमेन्ट छोडेर आएको छु (वा नेपालका लागि त्याग गरेको छु) भन्ने विषयमा खस्रो प्रवचन दिए । त्यो कार्यक्रममा उनीबाहेक अन्य प्रस्तोता र कतिपय स्रोता पनि कम महत्त्वपूर्ण थिएनन् र सबैले आआफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएरै कार्यक्रममा आएका थिए ! तर कसैले पनि आफूले बोल्ने क्रममा आफ्नो बढाइचढाइं गरेका थिएनन् । तर यी प्राध्यापकले लाजैमर्नु पारेर करिब दश मिनेट बिना कुनै लयमा आफ्नो डम्फु बजाए । उनको नमिठो आत्मप्रचार चलुन्जेल उनको बकबासलाई 'व्यक्तिगत समस्या' ठान्दै विषयवस्तुमा उनका विचार सुन्ने प्रतिक्षामा रहें म ।
तर जब यिनी नेपालमा किन राष्ट्रपतीय प्रणाली ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना तर्क पेश गर्न थाले तब मेरो यी प्राध्यापकप्रतिको सम्मान खुस्किंदै गयो ! मेरो नोटमा टिपिएका उनका तर्कहरू यस प्रकार थिए:
१. नेपालमा हामीले संसदीय प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हेरिसक्यौं, भोगीसक्यौं ! यो व्यवस्था नेपालमा प्रभावकारी भएन । जनताका प्रतिनिधिको किनबेच भयो । जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने दायित्वलाई व्यापार बनाए ! प्रधानमन्त्रीको कुर्सि स्थिर भएन ! त्यसैले नेपालमा अब राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिन्छ ।
२. नेपालका नेतामा र राजनीतिक दलमा अनुशासन छैन । सबै अराजक छन् । नागरिक समाज पनि चेतनशील छैन । राम्रो काम कसैले हुन दिंदैन । देश विकासको काममा सबै भाँजो हाल्न मात्र खोज्छन् । त्यसैले नेपाललाई सबैलाई तह लगाउन सक्ने कार्यकारिणी अधिकार सहितको राष्ट्रपति चाहिन्छ ।
३. यदि नयाँ नेपालमा पनि संसदले चुन्ने कार्यकारिणी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री राख्ने हो भने पुरानो र नयाँ व्यवस्थामा केहि अन्तर हुने छैन ।
४. मैले वेलायत बस्ने नेपालीहरूको मतसर्वेक्षण गरें । जसमा पांच लाख नेपाली मध्ये धेरै जसोले रास्ट्रपति सरकारप्रमुख हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैले नेपालमा अब राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिन्छ ।
म नेपालका कुनै राजनीतिक दलसंग मतदाताबाहेकको अर्को सम्बन्ध राख्दिन, न त संवैधानिक कानूनको ज्ञाता नै हुँ । तर, संसारका कतिपय मुलुकका राजनीतिक प्रणाली, तिनिको ऐतिहासिकता र तिनले पाएको अनुभवको मोटामोटी अध्ययनबाट म नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना गम्भीर भूल हुने कुरामा विश्वास गर्छु । तर त्यो दिन म राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षपाती प्रा. सुबेदीका विचारबाट नेपालमा उक्त प्रणालीको सान्दर्भिकताका बारेमा ज्ञान बढाउन चाहन्थे । यदि उनका विचार प्रभावशाली भएका भए म आफ्नो विचार परिवर्तन पनि गर्थें होला । तर, दुर्भाग्य वो सौभाग्य के हो त्यसो हुन भने पाएन ।
आज सूर्य सुबेदीका पुराना तर्कहरुलाई केलाउंदै म नेपालमा किन राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणाली जाति हुनसक्छ भन्ने विषयमा यो ब्लगमा आफ्ना तर्क राख्दैछु ।
१. सूर्य सुबेदीले नेपालको विगत कोट्याउँदै संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री अस्थिर हुने तर्क राख्नु भयो । वास्तवमा नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधर सबैले गर्ने सबैभन्दा 'जोडदार' तर्क यहि नै हो । तर, जम्माजम्मी १०-१२ वर्ष अभ्यास गर्न पाएको (२०४६ देखि २०५८) र प्रारम्भमा राजतन्त्रको अनि पछाडि आएर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको बहुदलीय अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? के हामीले संसदीय प्रणालीलाई साच्चिकै सहि रूपमा अभ्यास गर्ने अवसर पायौं ? राजतन्त्रको रुमानी षड्यन्त्र र सशस्त्र द्वन्द्वले थिलथिलो परेको कालखण्डलाई मात्र मापदण्ड बनाएर हामि विगतको व्यवस्थाको सहि मुल्यांकन गर्न सकौंला ?
२. के राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिं राजनीतिक अनुशासनहीनता वा भनौं दल/नेताको खिचातानीबाट अछुतो रहन्छ ? हाम्रै छिमेकमा माल्दिब्स र श्री लंकाले भोगिरहेको दुर्गतिले के भन्छ ? त्यहाँको राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक खिचातानी र 'फोहोरी खेल'को कारकका रूपमा काम गरिरहेको सबैलाई प्रस्ट छ । तसर्थ, राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक र पारदर्शी नभएसम्म कुनै प्रणाली पनि प्रभावकारी हुँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनासाथ राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क अत्यन्त कच्चा र अव्यवहारिक हो ।
३.लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र संस्कारको अभावबाट गुज्रिरहेका नेपालजस्तो मुलुकले ५ वर्षका लागि 'जननिर्वाचित तानाशाही' कसरि झेल्न सक्ला ? राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने भोलि के राष्ट्रपतिको काम कार्यवाही मन नपराउने दल वा उनकै दलका नेता ५ वर्षसम्म हात बाँधेर बस्लान ? त्यो बेलाको द्वन्द झन् कति भयानक हुन्छ कल्पना गरौँ । नेपाल जस्तो कमजोर र अल्पविकसित मुलुकको लोकतन्त्र हरेक परिस्थितिमा संवाद, सहकार्य र सहभागीताबाटमात्र चल्न सक्छ नकी शक्तिशाली राष्ट्रपतिको 'शासनबाट' !
४. अन्त्यमा, राजनीतिमा हरेक प्रश्नको समाधान 'मतसर्वेक्षण'बाट हुन सक्दैन । अझ हाम्रो वर्तमान सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक संरचनामा यो सम्भव नै छैन । त्यसैले, सूर्य सुबेदीको मतसर्वेक्षण काम नपाएको बेलाको हावादारी गफबाहेक केहि हैन । नेपालमा ऐले जनमतसंग्रह गर्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणालीले अत्यधिक मत ल्याउन पनि सक्छ, तर यसो भन्दैमा नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीले उचित हुन्छ भनेर तर्क गर्न मिल्दैन ।
त्यस दिन सूर्य सुबेदीको प्रवचन सकिएपछि म बाटोमा गम्दै गएँ -नेपालमा केहि चलाख मान्छेहरूले मिडियालाई हतियार बनाएर आफ्नो प्रख्याति राम्रैसंग गर्न जानेका रहेछन् ! फेरी मनमा अर्को विचार आयो हाम्रा मिडिया कैलेकाहीं हावामा दौडिने पनि गर्छन् । एकपटक सम्राट उपाध्यायको चर्चाको बाढीले नेपाल बगाउला जस्तो थियो । प्रदीप तुलाचनले पनि धेरैलाई मुर्ख बनाएकै हुन् । एकजना नक्कली धनाड्य (नाम बिर्सें)ले केहि बर्षअघि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई नराम्रोसंग उल्लु बनाएका थिए । त्यस दिन नेपालका पत्रकारहरूलाई मुर्ख बनाउनेहरूको सूची लामै भएजस्तो लाग्यो !
Posted by Sanjeev at 4:17 PM
Kala Koyu May 30, 2012 at 9:49 AM
i dont know which governance will work to overcome this situation of our country, n yes no body has ever convinced me....most of the time people uses the technique of Hypothesis testing, making oneself true not because of its reasoning but making other false..... yess i agree our media has not played the role of what it has to, many times they distort information, many times they are after cheap popularity, many times they create confusion among readers....